AIZA NO ALEHA : Piment Café- Behoririka -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : Piment Café- Behoririka
02/11/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Dekapy’s Band sy ny rock mavesatra
Taorian’ny tetsy amin’ny CFM Anosy, dia hitohy etsy amin’ny Piment Café ny seho ataon’ny tarika Dekapy’s Band, izay fantatra ao anatin’ny rock mavesatra. Haka endrika seho takariva kokoa ny seho amin’ity indray mitoraka ity, ary hifanakaiky kokoa Ratsimbazafy Thierry, na Dekapy sy ny ekipany sy ireo mpankafy. Ankoatra ireo hiran’i Dekapy noforoniny fony izy tao amin’ny tarika Green sy Apost toa ny « Vetivety », « mivaona »… dia efa nanome andran-tsira amin’ireo hira vaovao ry Dekapy’s band, raha tsy hilaza afa-tsy ny « ady », « Notongavanao »… Aorian’io seho etsy amin’ny Piment Café Behoririka io, dia tafiditra ao anaty fandaharam-potoanan’ i Dekapy amin’ny fandalovany an-tanindrazana ihany koa ny « Guitar’s DDp Night » etsy amin’ny Kudeta ny 3 novambra miaraka amin’i Deba sy Poon.
Hampitsinjaka amin’ny tsapiky i Lico Kininike
Vato namelan-kafatra. Zanak’i Rasoa Kininika nanohy ny asan’ny reniny i Lico Kininika, izay hanafana sy hampitsinjaka amin’ny Tsapiky etsy amin’ny Le Glacier Analakely anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ankoatra ny famelomana ireo hira nahafantarana ny reniny fony fahavelony, toa ny « Tso-drano », « Manambaly mampirafy », « Pascal », « Vita bornage »… dia ho entiny an-tsehatra amin’io seho takariva io ihany koa ireo hira nokaloiny taty aoriana, toa ny « Mamo baba », « Ianao anah »… « Cabaret mafana » no lohateny entin’ity mpanakanto ity amin’izao fandalovany an-drenivohitra izao.
Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina
Joseph d’Af hotronina feo lafika 300
Mpanakanto anisan’ireo manana ny toerana eo amin’ny sehatry ny hira fiderana. Mankalaza ny faha-5 taona nidirany teo amin’izany sehatra izany i Joseph D’Af, ary hankalaza izany etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina miaraka amin’ny feo lafika 300. Ny alahady izao no hanatanterahana ny fampisehoana manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Nahafantarana an’i Joseph D’Af ny fahaizany mitondra ny hira fiderana amin’ny gadona samihafa, ary ao anatin’izany ny gadona mafana. Hokaloiny mandritra ny fampisehoana ireo hira rehetra nahafantarana sy nanamarika azy tao anatin’izay 5 taona izay, raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Mpanjakan’ny mpanjaka », « Love », « Fitiavana voalohany »… Ho vahinin’ity mpanakanto nandresy tamin’ny fifaninanan-kiran’ny fankalazana ny fetim-pirenena 5 taona lasa ity ireo antoko mpihira sangany toa an-dry koraïta, Afafi ary ny Hosana.